I-Santaco ihlomulise abafundi ngomfaniswano | News24
I-Santaco ihlomulise abafundi ngomfaniswano
Abafundi bezinye zezikole ezihlomule ngoMfaniswano.isithombe: LETHIWE MAKHANYA
IKHANSELA laka-ward-27 uMnuz Manqoba Ngubo ushayele inhlangano yamatekisi i-South African National Taxi Council (Santaco) esifundeni uMgungundlovu ihlombe, ngokwelula isandla belekelele izingane ezentulayo ngomfaniswano.
UMnuz Ngubo nobebambele iMeya yoMasipala uMsunduzi uMnuz Themba Njilo ukusho lokhu emcimbini wokunikelwa ngomfaniswano ezikoleni ezingaphansi koMgungundlovu obuse City Hall ngoLwesihlanu mhla zili-13 kuMbasa (April).
Lo mcimbi ubuhlelwe inhlangano yamatekisi i-Santaco ngokuhlanganyela nabosomabhizinisi abehlukene abangaphansi kwesiFunda iMgungundlovu.
Kulo nyaka kuhlomule izingane eziyizi-1 400 kulolu hlelo kanti zonke lezi zingane ziphuma ngaphansi kososeshini abangama-40 abangaphansi kwesifunda uMgungungundlovu.
UMnuz Ngubo uyale abafundi ngokubaluleka kwemfundo ebatshela nokuthi isizathu esibayisa esikoleni esokuthi bayothola imfundo kuphela.
“Kumele nifunde nibe izingane ezingcono ngalendlela eningaba iyona ngoba ilokho okubalulekile. Nikhumbule futhi ukuthi ukuya kwenu esikoleni yingoba nifuna ukuyozithuthukisa ngokwemfundo.
“Uma izinhlangano ezifana nalena yamatekisi zifika zilula isandla zithi zizosiza zisuke zikwenza lokho zingalindele ukuthi nizikhokhele imali kodwa zisuke zifuna nizikhokhele ngokuthi nisebenze ngokuzikhandla nenze nomsebenzi wenu wesikole nihloniphe othisha benu nokuyinto esemqoka kakhulu,” kubeka yena.
Uphinde wayala nabazali wathi kumele bazi ukuthi banomsebenzi wokusiza noma eyiphi ingane ngoba wonke umuntu ubheke usizo uma sekwedlule isikhathi sesikole.
“Siyabonga kakhulu kuMgungundlovu Regional Taxi Association ngalomsebenzi wabo omuhle kangaka nofaka injabulo ebusweni bezingane nokwenza izimpilo zabahlali bakulendawo zibe lula.”
USihlalo walenhlangano uMnuz Bheki Sokhela uthe sebeneminyaka ethi ayibe yi-10 beqhuba lo mkhankaso.
“Ukuluqala kwethu lolu hlelo sabona isimo esasikhula ngaphansi kwaso kudala ukuthi sasiya esikoleni singenawo umfaniswano. Besingafuni ukuthi izingane zethu nazo zigcine sezizithola zikuleso simo ngoba lokho kuzoba nomthelela omubi ezifundweni zazo.
“Zizogcina sezinqena ukuya esikoleni ngoba zizenyeza ukuthi azifani nabanye abafundi.
“Sifuna ukuthi izingane uma ziya esikoleni zikhululeke yingakho sizinikeza umfaniswano ogcwele kusuka esicathulweni kuya phezulu. Siyakholelwa ukuthi lokhu kuzobakhuthaza ukuthi bafunde ngamandla,” kubeka yena.
Uqhube wathi nakuba lukhula lolu hlelo minyaka yonke isifiso sabo ukuthi bagcine sebesiza izikole bengagcini nje ngabafundi kuphela.
“Siyafisa ukuthi uhlelo lwethu olulandelayo silekelele ngama-computer ezikoleni ukuze noma sebehambile labo bafundi aqale kubona kodwa wona asale aqhubeke alekelele abafundi abalandelayo.
“Ngaleyondlela kuyobe sekusizakala umphakathi wonke ayi umuntu ngamunye nje kuphela,” kuphetha uMnuz Sokhela.